Thread tapes Ulwazi - China Obungunaphakade Friendship Ptfe Tape
Thread amakhasethi lisetyenziselwa ukuvala, amafutha, kunye nokuthintela nokuhlutha phezu nezitshixo yangaphakathi, amaqhosha ebhutsi, kunye nezilinganisi. Bona owaziwa ngokuba:
tape umtywini kaThixo
Thread amakhasethi yenziwe polytetrafluoroethylene (PTFE), i crystalline kakhulu, Polymer perfluorinated elaziwa ngcono ngokohlobo yayo Dupont nabhaliswe uphawu-Teflon. PTFE tape yi kukho inani eliphantsi kakhulu kunobunye, ukumelana imichiza elungileyo, kunye nokumelana elungileyo nobushushu. inertness Chemical kuthintela cross-noqhagamshelo yenza PTFE msonto iiteyiphu ukhetho elungileyo izicelo eziquka iikhemikhali bako ezifana ioksijini elulwelo, okanye caustics ezifana ammonium hayidroksayidi. Thread tapes nako kwakhona polyethylene (eBhayi), yeplastiki zexabiso eliphantsi esingafuni amanzi kunye neekhemikhali ezininzi.
Thread amakhasethi athwale iinkcukacha ezifana:
PTFE intambo tape abathengisi ichaza iimveliso zabo nokuba lwetshiphu emsebenzi-mninzi okanye esezantsi-mninzi. tapes High-mninzi PTFE msonto bazikhanda ukuxinana .70 g / cm3 okanye 1.2 g / cm3. tapes Low-mninzi PTFE msonto bazikhanda ukuxinana .37 g / cm3. uqine ungamandla efunekayo ukwaphula iqhekeza tape intambo batsale kwiincam. Zobude kukunyuka iqhezu ngobude i tape umsonto elifanelekileyo ntshikilelo kwempixano okanye ukwandiswa thermal. kumlinganiselo Kubalulekile ukuba amakhasethi ngomsonto ziquka ubude, ububanzi, nezinyuko. Ngokubhekiselele zeendawana ehambelanayo, iiteyiphu Teflon ziyilelwe ukusetyenziswa kunye nemibhobho, iityhubhu, okanye imijelo ezenziwe-aluminiyam, ensimbi amnyama, okanye zezobhedu. Okunye PTFE intambo itywina tape ibambelela chrome, ikopolo, iglasi, iplastiki, okanye irabha.
PTFE umsonto amakhasethi landela imigangatho emibini esisiseko umgangatho kwaye lombala-coded ngenxa yezizathu ezininzi ezahlukeneyo izicelo. Mil-T-27730A i US imigaqo yasemkhosini (Mil-Spec) ukuba acacisa ubukhulu ubuncinane mils-3. AA-58092 yi umgangatho yorhwebo egcina imfuno Ebubanzini Mil-T-27730A, kodwa wongezelela umgangatho loxinano ubuncinane. White tape PTFE ngomsonto inika amatywina ndiyixinanisele ezahlukeneyo amalungu yangaphakathi yaye ilungele imibhobho ezininzi neenkqubo yamanzi aselwayo. Yellow tape PTFE ngomsonto yenzelwe ukusetyenziswa imibhobho, imijelo, iibholiti, iivelufa kunye imigca igesi azinamsonto nadlulisela umoya, ammonia, butane, chlorine, okanye hydrogen. Pink tape Teflon yenziwe ngephepha le-, grade kwimizi PTFE kwaye ezisetyenziswa kwizicelo zorhwebo okanye mveliso ngemibhobho yamanzi. Green tapes Teflon umsonto ukuze isetyenziswe kwizicelo ioksijini-anganika.